Mashiinka lagu duro Diesel
Mashiinka Mashiinka Naaska
Qiimaha Delphi Injector Valve
Soo Kordhin Qiimaha Injector Valve
Qaybaha Mashiinka Gawaarida ee Wershadaha 23670-30170 295900-0190 Diesel Shidaalka Shidaalka 23670-30170 Iibsashada kulul
Liaocheng Jiujiujiayi duritaanka Shidaalka Co., Ltd.
Waxaan ku dadaalnay sidii aan u yareyn laheyn isticmaalkaaga.
Jiujiujiayi waxay u tixgeliyaan tayada nolosha,
Amaah wanaagsan sida nafta, guushaada waajibaad ahaan
Qandaraaska Raadinta Haamaha Saamiga Shidaalka Xakameynta ...
Xawaare Guud oo Xawaare Khadka Shidaalka ah ...
Duritaanka Wadada Wadada Weyn ee Denso ee Shidaalka Shidaalka 23670 -...
Durid Wadada Weyn ee Denso ...
Qeybaha Gawaarida ee La Wadaago Shidaalka Shidaalka Guud 23670-3005 ...
Auto Qaybo Shidaal Rail Common
Toyota 1KD 2KD Wadada Tareenka ee Guud 23670-30400 ...
Toyota 1KD 2KD Wadada Tareenka ...
Duritaanka Wadada Wadnaha ee Denso Caloosha Shidaalka 095000 ...
C15 C18 diir Cirbadeyaha Shidaalka 253-06 ...
Diesel C15 C18 Diir…
Dheecaanka Maska Dabaxa leh ee loo yaqaan 'Cirperpillar Pencil Injector' 23600-59105
Durid Jaraha diiran
Common Rail Bosch Injector 0445120142 Wixii Yamz ah
Rail Rail Injector Common ...
C15 C18 C32 Cirbadaha Perkins 253-0618 2530618 1 ...
C15 C18 C32 Perkins Injectiono ...
IT12B Cirbadeeyaha Bisadda 127-8205 0R8479
Sikastaba Wadada Iskuxiran ee Magaalada Bosch 0445120394 0 445 120 ...
isku darka cirbadaha tareenka ...
naaftada duritaanka 0445120217 ...
Jiujiujiayi badanaa wax soo saarku waa: bamka naaftada, aaladda naaftada, biiyaha naaftada, qalabka wax lagu buuxiyo, qalabka wax lagu buuxiyo ee loo yaqaan 'solenoide valves', matoorrada cabbiraadda mashiinka, qalabka xakamaynta soo saarida mashiinka / SCV, naaftada naaftada iyo waalka dhalmada. sidoo kale waxaan bixinaa adeegga dib-u-soo-soo-saarka bamka & duritaanka duritaanka. Badeecadahan waxaa loo iibgeeyaa Yurub, USA, bartamaha iyo koonfurta Ameerika, Koonfur-bari Aasiya iyo Afrika. Tayada alaabada ayaa waxaa ansixiyay macaamiisha aaggan.
Macaamiisha Ruushka Soo Booqo Shirkaddayada
2019.10.25th macmiilkan ayaa soo booqda warshadeena, wuxuu aad ugu qanacsan yahay qalabka wax soo saarkeena. Sababtoo ah qalabkeenu waa sumadda ugu caansan adduunka oo dhan, oo weliba waa daabacaaddii ugu dambeysay. Sidan ayaan u hubin karnaa wax soo saarka saxda ah. Kaliya maahan tayo sare, t ...
Baamiyaha iibiyaha qodista nozzles iyo sooca gaaska weelka 1
Waxyaabaha qaaska ah iyo qaababka nidaamka Tani waxay noo ogolaaneysaa inaan gaarno: NOZZLE NEEDLE (KURSIGA & QAADASHADA Mashiinka) CBN shiidaalka wareega wareega wareega <15s 2 dhexroor cabbirka geedi socodka madax toosan <0.3µm piezo tailstock hage dhexroor khaldan Ra <0.06µm pre-measurem. ..
Bahmueller oo loo yaqaanno nozzles iyo qeexidda tuubada waalka 2
JIDKA MAGAALADA GUUD INGELINTA 2 Mashiinka mataanaha (2 unug oo wax ku shiidaya hal saldhig mashiin) kala badh waqtiga wareegga oo leh saami isku dheelitiran oo hooseeya oo isugeyn ah saldhigga 4 ee loogu talagalay qaabka iyo saxitaanka dhexroorka tooska ah ee la waafajiyay
Tayada badeecada waxaa ogolaaday Jarmalka iyo USA
Xuquuqda daabacaadda - jiujiujiayi: Dhammaan Xuquuqda Aad ayaa Leedahay.